जाडो मौसममा छालाको सुरक्षा कसरी गर्ने ? » Enavanari
जाडो मौसममा छालाको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
शान्ति लिम्बु, ब्यूटिसियन
सुन्दरता नारीहरुको गहना हो यसलाई जोगाइ राख्न छालाको राम्रो स्याहार गर्न जरुरी छ । जाडो मौसममा छालाको राम्रो स्याहार गरेन भने विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दछन् । छालालाई चम्कीलो, सफा, मुलायम र फ्रेस राख्नको लागी सिएमपिएन अर्थात सिः क्लन्जीङ्, एमः मोइश्राइजिङ्, पिः प्रोटेक्सन (सनब्लक), एनः नर्सिङ्नाइट क्रिम, यसको लागी छालाको प्रकार थाहा पाउन जरुरी छ । मानिसको छाला चार प्रकारको हुन्छ ।
१. ड्राइ स्कीन
२. ओयली स्कीन
३. सेन्सेटिभ स्कीन
जाडोमा छालाको स्कीन कागज जस्तै नाजुक हुन्छ । यसलाई होसियारीका साथ स्याहार गर्नुपर्दछ ।
विहानः फेसवास गर्दा माइल्ड फेसवास गर्ने तेसपछी टोनर लगाउने । टोनरले छालाको अनावश्यक खुल्ला छिद्रलाई बन्द गर्दछ र मोइश्जराइज प्रयोग गर्दछ । यसको लागी एलोभेरा प्रयोग गरेर त्यस पछी सनस्क्रीम प्रयोग गर्ने ।
डिप क्लीनगर्नेः क्लीजिङ् गर्दा नरिवलको तेल र एलोभेराको रस मिसायर पनि गर्न सकिन्छ । यसले छालाको मेकअप रिमुभ गर्नुको साथै छालालाई मोश्चराइज गर्दछ । त्यसपछी सर्व गर्ने सर्व गर्दा बेकिङ् पाउडरमा थोरै पानी मिसायर हल्का गरि गर्नुपर्दछ । त्यसपछी एलोभेरा र हनि मिसाएर फेस मास्कको रुपमा प्रयोग गर्ने र यसलाई ३४ मिनेट पछी वास गर्ने । त्यसपछी नाइट क्रिम लगाउने वा भ्यास्लिन प्रयोग गर्नुहोस ।